नेपालमा लकडाउन खु`लाउन ‘जर्जि`या मोडल’, यसरी खुकु`लो हुँ`दैछ अबको लक`डाउन !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/नेपालमा लकडाउन खु`लाउन ‘जर्जि`या मोडल’, यसरी खुकु`लो हुँ`दैछ अबको लक`डाउन !!
नेपालमा लकडाउन खु`लाउन ‘जर्जि`या मोडल’, यसरी खुकु`लो हुँ`दैछ अबको लक`डाउन !!
काठमाडौं, २८ जेठ । काठमाडौंमा ब्यापारीहरुले लकडाउनको उल्लंघन गर्दै व्यापार संचालन गर्न लागेका छन् । न्युरोड र वालुवाटारमा प्रदर्शन समेत भएको छ । जनस्तरवाट लकडाउन खुकुलो बनाउन दवाव भइरहेको बेलामा साँझ ५ वजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको छ ।
दिउसो २ वजे बोलाइएको बैठक ५ वजे बस्ने भएको छ । सरकालाई लकडाउन खु`कुलो बनाउन दवाव परेसंगै अब लकडाउन खुकुलो बनाउने रणनीति बनाउन सरकारले तयारी थालेको छ । बुधवार संसदमा वजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन अब खुकुलो हुने संकेत दिइसकेका छन् ।
उनले लकडाउनलाई कायमै राखिने र जनजीवन सहज बनाउन मोडालिटी हेरफेर गरिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार सरकारले पाँच चरणमा लकडाउन खोल्ने प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ । अब लामो समय लकडाउन थेग्न सक्ने अवस्था नभएका कारण खु`कुलो बनाउने रणनीति सरकारले बनाएको हो । कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले पाँच चरणको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
सीसीएमसीले प्रस्ताव गरेको मोडालिटी, जसलाई उनीहरूले जर्जिया मो`डालिटी भनेका छन । पश्चिमी एसिया र पूर्वी युरोपको दोसाँधमा रहेको जर्जियाले दुई–दुई सातामा लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै जन जीवन सहज बनाइरहेको हुँदा नेपालमा पनि सोही मोडल अपनाएर लकडाउन खुलाउने तयारी सरकारले गरेको हो । त्यसमा पहिलोे चरणमा असार १ गतेदेखि निजी कार, एवम् ट्याक्सी सेवा, डेलिभरी सर्भिस, ओपन एयर मार्केट, कृषि क्षेत्र खुला गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो चरण असार १५ गतेदेखि निर्माण क्षेत्र खुला गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा निर्माण साम`ग्रीको उत्पादन, कार वास सेन्टरहरू, अटो सर्भिससँग सम्बधित सम्पूर्ण सेवा सुचारु गर्न सकिने उल्लेख छ । तेस्रो चरण, असार २९ गतेदेखि सपिङ मलबाहेकका खुद्रा एवम् होलसेल, प्रकाशन गृहहरू, खुला बजार क्षेत्र भृकुटी मण्डप, कालिमाटी तरकारी बजार जस्ता स्थानहरू पूर्णतः खुला गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
चौथो चरण, साउन १२ गतेदेखि सपिङ मल, रेस्टुराँ, बैंक, एवम् वित्तीय सेवा, ब्युटि सैलुन आदि खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ । पाँचौं चरण, साउन २६ गतेदेखि क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस, धार्मिक क्षेत्र, अनसाइट रेस्टुराँ एवम् होटलसँग जोडिएका सेवा क्षेत्र खोल्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । लकडाउनको खोल्ने पाँचौ चरणमा बाँकी रहेका सबै संचालन गर्ने उल्लेख छ । जसमा शैक्षिक संस्था, फिल्म हल लगायतका भिडभाड हुने क्षेत्र पनि सञ्चालन हुनेछन् ।
फेरि देशव्यापी लकडाउन गर्ने सरकारी तयारी !!
भर्खरै आयो यस्तो निर्णय : एक साताका लागि बजार पूर्णरुपमा बन्द गर्ने, सवारी पनि नचल्ने !
के भोलीबाट सार्वजनिक यातायात चल्छ`न्, यसो भन्छ यातायात व्यव सायी संघ
भोलिदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म सबै बन्द ! (सूचनासहित)